मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी सुरू « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०७८, बुधबार
काठमाडौं, असोज १३। सरकारका गठन भएको साढे दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आग्रहमा सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन लागेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका चार दलबीच कांग्रेसले सात मन्त्रालय र माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले ६÷६ मन्त्रालय लिने विषयमा समझदारी बनेको भए तापनि कुन–कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्नै अझै टुंगो लागिसकेको छैन । गृह, अर्थ, ऊर्जा, न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले थप १६ मन्त्री नियुक्त गर्नुहुनेछ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने ६ जना मन्त्रीहरूको नाम बुझाइसकेको बताइएको छ । बुधबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताउँदै एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले भने– ‘गठबन्धनका दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रीमण्डलले अब पूर्णता पाउँछ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
पहिरामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई २ लाख
मान्म, १० कात्तिक । कालीकोटमा वर्षाका कारणले पहिरामा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई रु दुई लाख
सप्तरीको केरा बगानमा क्षति
राजविराज, १० कात्तिक । अविरल वर्षासँगै एक साता अगाडि आएको हावाहुरीका कारण सप्तरीको खडक नगरपालिका–१०
मखमली फूल टिप्दै किसान
भक्तपुर, १० कात्तिक । तिहार नजिकिँदै गर्दा सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुण्डुमा व्यावसायिक रुपमा गरिएको फूलखेतीमा मखमली
गाईघाट–सानुभञ्ज्याङ कृषि सञ्चालनमा
गाईघाट, १० कात्तिक । देवघाटको गाईघाट सानुभञ्ज्याङ कृषि सडक दस दिनपछि सञ्चालन आएको छ ।
घट्यो सुनको मुल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं, १० कात्तिक । नेपाली बजारमा केहि दिनदेखि निरन्तर बृद्धि भएको सुनको मूल्यमा आज गिरावट
कसैले माग्दैमा प्रधानन्यायाधीश जबराले किन राजीनामा दिने ? : बालकृष्ण न्यौपाने (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १० कार्तिक । बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले कसैले माग्दैमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा
नेपाल बंगालदेश बैंकको साधारणसभा मंसिर २ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं, १० कात्तिक । नेपाल बंगलादेश बैंकले २७औ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकले मंसिर
नारायणी बैंकका अध्यक्ष वाग्लेको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौं, १० कात्तिक । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज वाग्लेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्